मनोज गजुरेलले गरे दाेस्राे बिवाह ! को हुन त उनि ? जान्नुस – Online Khabar 24
मनोज गजुरेलले गरे दाेस्राे बिवाह ! को हुन त उनि ? जान्नुस
October 11, 2021 October 11, 2021 by admin admin
हाँस्य कलाकार मनाेज गजुरेलले दाेस्राे बिवाह गरेका छन् ।
उनले न्या’य सेवाकी अधिकृत मञ्जु पोखरेलसँग आज (सोमबार) भक्तपुरको डोलेश्वर महादेवको मन्दिरमा बिवाह गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् बिवाहका तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्दै मनाेजले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
आफ्नो दोस्रो बिवाहबारे जानकारी गराउँदै मनाेजले लेखेका छन् : आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुमा सुखद जानकारी !जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ । मेरो लामो वैवाहिक जीवन ४ बर्ष पहिले का’नुनीरुपमा टुंगि’एको कुरा यहाँहरुलाई वि’दितै छ ।
त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ ।जीवनयात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महशुस हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैगरी मेरा बाबु-नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा सं’वेदन शिल हुनुपनि जरुरी थियो ।
यी दुबै अवस्थामा साथदिने सहयात्रीको अभाव समयक्रममा ख’ड्किँ’दै आयो । बाबुनानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो ।यसै क्रममा नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिनजान हुनपुग्यो । विस्तारै हाम्रो घनि’ष्टता बढ्न थाल्यो ।
एकै खालको परिबेश र उस्तै खालको भोगा’ईबाट गुज्रि’एका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ । एक अर्काका जिम्मेवारीलाई साझा जिम्मेवारी मानेर पूरा गर्ने बाचा गर्याैं ।अगाडि आईपर्ने सु:ख/दु :खलाई मिलेर स्वीकार र प्रति’कार गर्ने संकल्प लियाैँ । हामीलाई यो निर्णयमा पुग्न हाम्रा बाबुनानीहरुको सुझाव र सहमतीले पनि ठूलो मद्दत गर्यो ।
विगतका अरा’जक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अ’भद्र व्य’वहारका कारण म र मेरा छोराछोरीले ठूलो आ’घातबाट गु’ज्रनु परेको छ । त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचाल्ने र गि’जोल्ने यु’ट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत संजालका प्रयोगकर्ताहरुलाई पनि भ’द्र सुझाव छ- कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला ।
सामाजिक सन्जालको ‘दुरु’पयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने ‘गं’भिर अ’सरलाई पनि महशुस गर्नुहोला ।अन्त्यमा, पुनः सम्पुर्णं आफन्त, साथी तथा शुभ चिन्तकहरुलाई यो सुखद जानकारी गराउछौँ कि हामीले आज मिति २०७८ साल असोज २५ गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवकाे दर्शन गर्यौँ ।
Prevगाडी चलाइरहेका बेला ड्राइभरले शा,री,रि,क स,म्बन्ध राख्दा भयानक दु’र्घटना !
nextजसले १४ वर्ष पहिले बचाएका थिए उनैको काखमा चर्चित माउन्टेन गुरिल्ला नदाकासीको मृ’त्यु !